Gbasara anyị - Ningbo Rumotek Magnetik Technology Co., Ltd.
Ndị otu anyị nwere ndị ọkachamara a pụrụ ịtụkwasị obi bụ ndị a zụrụ azụ iji mesoo akụkụ niile nke ọrụ ndọta. Rumotek bụ ụlọ ọrụ amaara ama, ụlọ ọrụ nyocha na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Europe na North America.
Ndị otu ndọta na-enye gị mmezi nke nrụnye na igwe ọrụ gị. Usoro dum na-agbaso ISO 9001: 2008 na ISO / TS 16949: usoro njikwa njikwa 2009. Onye ọ bụla n’ime ndị injinia anyị na-amalite isonye na ọrụ magnetik dabere na opekata mpe afọ 6 na ndọta gụnyere eserese CAD, ịhazi ngwa ọrụ na ntinye ihe eji arụ ọrụ, ihe nyocha na ule. Nke a na-enyere anyị aka ịnye gị ọkwa kachasị elu nke ọrụ ọkachamara.
Ọmarịcha, na-amalite site na omume
RUMOTEK etinyela onwe ya na ụlọ ọrụ ndọta dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eweta NdFeB, SmCo, AlNiCo, Ceramic and Magnetic Assemblies.
Ezigbo ndị otu na-emepụta ihe amatala akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ site na mmalite ma na-eduzi mgbanwe mgbe niile nke ngwaahịa na-eso n'okporo ụzọ nke izizi, ịdị mma na ogo na enweghị nkwenye.
Ọtụtụ afọ nrụnye magnet na ịkpụzi ahụmịhe na-enye anyị ọhụụ na ọrụ zuru ụwa ọnụ nke ihe niile metụtara ndọta.
Qualitykpụrụ dị elu dị elu, nlezianya anya na nhazi na azụmaahịa azụmaahịa bụ ihe nyere RUMOTEK ihe ịga nke ọma ya na China na mba ofesi dịka otu n'ime ndị na-arụ ọrụ kacha mma nke ụlọ ọrụ ndọta.
Na-eche maka nkọwa, imewe onwe, nlezianya nhọrọ nke ihe, na-aga n'ihu technologic mmepe na kacha anya ka ahịa afọ ojuju. Qualitykpụrụ dị elu dị elu, nlezianya anya na nka na azụmaahịa bụ ihe ndị mere ngwaahịa RUMOTEK bụ ezigbo nhọrọ.
Rumotek na-emetụta ogo dị oke mma, nrụpụta dị elu, na usoro magnetik ọhụụ iji mee ka ndị ahịa nwee ọganiihu na uto nke nzukọ anyị.
Ọhụụ Rumotek ga-abụ ezigbo ihe na-eweta ihe magnetik, na-agbanwe agbanwe, na-arụ ọrụ zuru oke. Anyị na-ebute ụzọ mmepe nke ngwa na teknụzụ na-emechi oghere nke ndị mmekọ azụmaahịa anyị bụ isi na-eche ihu n'ịga n'ihu na-agbanwe agbanwe.
Omenala Rumotek na-enye ndị otu anyị ike imepụta ihe ọhụụ, mụta, ma nye azịza nke na-emetụta ụwa anyị nke ọma. Gburugburu anyị na-akwado ma na-akwado nkwado nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-arụ ọrụ dị elu nwere nnukwu mmụọ maka azịza anyị na-enye ndị ahịa anyị. Anyị na-etinye ego na ndị otu anyị na obodo.
Nzube na injinia: Rumotek na-enye ikike mmepe ọrụ zuru oke na-eji ọtụtụ 2D na 3D ngwanrọ ngwanrọ magnet. A na-echekwa ụdị dị iche iche magnetik dị iche iche maka ọkọlọtọ ma ọ bụ mmepụta ngwaahịa. Rumotek na-emepụta ma na-arụpụta magnetik ihe ngwọta maka ọrụ na:
• Ngwaọrụ akpakanamde
• Nchịkwa Motion eletrik
• Ọrụ Ubi Mmanụ
• Usoro ọdịyo
• Njikwa Ihe Njikwa
• Ferrous Nkewa
• Usoro breeki na ipigide
• Aerospace na Mmemme nchekwa
• Mmetụta na-akpali akpali
• Mkpa ihe nkiri Nkọwa na Magnetik Mgbakwunye
• Dị iche iche Holding na Eweli ngwa
• Lokpọchi Safety System